Indlela yokunyamekela i-aquarium fish neons
Ukuba ufuna ukuthabatha izindlu ngeentlanzi ezintle ezilumkileyo ze-aquarium, ukunyamekela okulula, i-fish ye-neon ingakumbi kuwe. Kwizinto eziphilayo, le ntlobo ihlala emilanjeni ecocekileyo, ezolile kunye namanzi acacileyo, umzekelo, i-Amazon. Kwaye kuthi eRussia i-neon ishaya nje kwiminyaka emihlanu edlulileyo. U-Neon ubizwa ngokuba njalo, ngokuba kunye nomzimba wakhe wonke unomkhanyo okhanyayo. Ngokuqhelekileyo luhlaza okwesibhakabhaka, kodwa kukho eminye imibala. Ubume bomgca lunokuhlukanisa abantu besilisa. Kwindoda, ilungile, kwaye amaqabane abo phakathi aphihlile. Iintlanzi ngokwazo zincinci, ubude bomzimba buyi-three to four centimeters kuphela, ngelixa ibhinqa likhulu kuneliyindoda, kwaye isisu sisondeza. Kwi-neon eqhelekileyo, inxalenye engezantsi yomzimba ibomvu obomvu, kwaye iifom ziyabonakala.
Iintlobo zeentlanzi ze-aquarium ze-neon.
Iintlobo ezine ze-neon zazisetyenziswa kakhulu phakathi kwamanzi. Okokuqala, i- blue neon, okanye i-neon eqhelekileyo . Lo ngummeli omncinci wale ntlanzi. Ngaloo nto inxalenye ephambili yegama elibomvu. Umgca wesigxina ohlangothini luhlaza okwesibhakabhaka, kufinyelela kwamehlo, kwaye kufutshane nomsila, unokuthi ube nebala elihlaza okanye elibomvu. Enye inhlobo i- neon ebomvu , ummeli oqaqambileyo wale ntsapho. Unombala obomvu obomvu unomzimba osezantsi. Umqhopholo, ukususela kwiso ukuya ekugqibeleni ioli, kusekhona okwesibhakabhaka. I-Neon eluhlaza okwesibhakabhaka , ngokuchaseneyo, yanika amathoni obomvu. Umzimba wakhe ukhanyisa nge-shades "eluhlaza". Umgca ohlangothini sele usemnyama okwesibhakabhaka, isisu se-pink-violet. Ubukeka obukhangayo kakhulu yesine ifomu eyaziwayo - i- black neon . Imivumbo yakhe ibini: enye iyakhanya kwaye iminyene eluhlaza okwesibhakabhaka, enye enye ilapha ingezantsi-inkulu kwaye imnyama. Izintsalela zeentyantyambo ezibomvu, iimpawu zeentsapho zakhe, zagcinwa ngasemva kunye nesisu esisemgangeni.
Imithetho yokugcinwa kunye nokunyamekelwa kweentlanzi nge-neon.
I-neon e-aquariums ayinzima. Ukujongana neentlanzi kungabini bobuchule bezakhono kunye nabaqalayo be-aquarists. Ubume obuyimfuneko yokuphila ngokukhululekile kule ntlanzi ngamanzi athambileyo, kwenye indawo abayi kukwazi ukuphindaphinda. Imfuyo ye-Neon - intlanzi, ukuba kukho ngaphezu kweyesithathu kwi-aquarium, baya kuhlala behlangene kunye. Ukuba iintlanzi ziloyiko okanye ziziva zengozi, zibuthana kwi-pack thick and swim fully synchronously, ezibukeka zihle kakhulu, ngakumbi ukuba zihlala kwi-aquarium yakho enkulu kunye nezityalo ezininzi. Kodwa, ewe, akukho imfuneko ukutyhila intlanzi kunoma yimuphi umxinzelelo, kuba ezi zinto ziyakwazi ukutshabalalisa imivimbo ekhanyayo. Kodwa ukuba kwenzeka ntoni, ungakhathazeki - ngokuhamba kwexesha, umbala ufanele ubuyele. Ngoko, makhe sibone indlela yokunyamekela i-aquarium fish neon.
Kwi-aquarium enkulu ungahlala kwiintlanzi eziliqela. Kwintlanzi encinci, kuphela iintlanzi ezi-5-6 ziza kuziva, kodwa ziya kukunceda ukuba uphefumlelwe ubuhle beelwandle ngqo ekhaya. Ukugcina i-neon kufuneka ibe kukushisa kwama-degrees 18 ukuya kuma-23. Ubushushu obuphezulu bamanzi yi-degrees ezingama-28, kodwa kule ntlupheko intlanzi iqala ukukhawuleza kwaye iya kuhlala ngaphantsi komnyaka, ingashiyi inzala. Ngaphantsi kweemeko ezilungileyo, i-neons ikhona iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu.
Kwizilwanyana zasendle, ngokuqhelekileyo zihlala zizinzulu, ngoko kubalulekile ukuba zenze idibaniso yeendawo ezikhanyayo kunye ezinomthunzi. I-Grunt ibhetele ukuthabatha umbala omnyama, kodwa le nto isisombululo sezobugcisa, kuba kwimvelaphi emnyama imibala eqaqambileyo yeentlanzi ibonakala ingakumbi. Yaye intlanzi ayinandaba nokuba ngumthunzi onjani. Ifayile yokucoca amanzi akufanele idale imilambo eqinile, kuba kwimilambo ejulile, apho i-neons ijwayele khona, ayikho. Kwi-aquarium, kufuneka kube neendawo ezizolileyo apho iintlanzi zihlala khona zodwa.
Ekudleni, i-neons ayithobekanga. Bonwabile ukutya kunye nokutya ukutya, kwaye baphile, kunye neqhwala kwaye bome. Unokondla ngesimo se-granules, iibhola. Mhlawumbi, akukho imfuneko ukuwaphonsa iipilisi kwiintlanzi ezantsi, nangona i-neon elambile kakhulu kunye nabo iyakwazi ukuhlangabezana nayo. Musa ukuyondla i-neon ngokuphindaphindiweyo: le ntlobo ifumaneka ekutyebeni, inamandla ngakumbi ukuphakama kwamanzi. Ubutyebi buyingozi kakhulu kubafazi, ngenxa yoko abanako ukuhlutha amaqanda, kwaye i-caviar eyimfuneko eseleyo emzimbeni wabo iqala ukubola, iwabethe intlanzi.
Njengomthetho, akukho mfuneko yokuphatha i-neon. Nangona kunjalo, ukuba intlanzi isagula, ngoko xa uyiphatha, cinga ukuba ii-neons zibuhlungu kakhulu kwizinto zobhedu emanzini. Ngoko ke, ukuba intlanzi egulekileyo yinto efana ne-aquarium njengentlanzi enempilo, ukunciphisa umthamo wezilwanyana kwisiqingatha.
Ukuze uzalise ngokuphumelelayo i-neon, khumbula imithetho embalwa elula. Iimeko eziphambili, njengoko sele zikhankanywe ngasentla - amanzi athambileyo. Ukuba i-neon ngokwayo iyasinda emanzini anzima, ke i-caviar yayo ayinjalo nakanjani, kuba kulo mzekelo igobolondo lamaqanda liba nzima kakhulu, kwaye intlanzi esanda kuzalwa ayikwazi ukungena emanzini. Ngethuba lokuzala, kungcono ukuthatha amancinci emanzini amanzi-ukuya kuma-elitha alitha. Ungasebenzisa izimbiza eziqhelekileyo kodwa ezicwangcisiweyo. Amanzi angcono ukuthatha i-distilled, ngaphandle kokungcola. Ngaloo nto unako ukongeza amanzi ambalwa kwi-aquarium eqhelekileyo, apho i-neon ihlala khona. Iipropathi zamachiza zamachiza kufuneka zitshintshelwe kwi-acidic. Oku kuya kufumaneka ngokufaka i-decoction ye-oak bark, i-alder cones okanye i-elm. Kwi-substrate, kungcono ukusebenzisa umgca wokuloba okanye igridi, kuphela ukuhlala i-perifera, njengokuba imingxuma ingenayo kwi-aquarium kunye nabo. Ngentonga ekhethiweyo yeglasi, lungisa i-substrate ngasezantsi, kwaye ngokuhlwa, tshala i-neon fish kuyo. Inkqubo ngokwalo, njengomthetho, iya kusasa, phantsi kokukhanya okuphantsi. Ukuba ukuzala akuzange kwenzeke, intlanzi ingasala enye intsuku ezimbalwa, kodwa kungekho ixesha elide. Xa kwenzeka ukungaphumeleli, kungcono ukuwavumela ukuba abuyele kwi-aquarium eqhelekileyo aze abondle rhoqo iintsuku eziliqela.
Emva kokuzala, i-neon kufuneka isuswe, kwaye i-aquarium ene-caviar ifanele ifihliwe, kuba i-caviar ayiyikunyamezela ukukhanya. Ngomhla wesibini okanye wesithathu kufuneka ubonakale izibungu: ziya kuxhoma kwiindonga. Kwiintsuku ezintlanu i-froysty result that should begin to swim. Kwiintsuku zokuqala zobomi babo, banokudliwa kunye ne-infusoria, i-colvet kunye nezinye iifowuni encinci. Kodwa gcinani engqondweni ukuba ngokungafani neon omdala, i-Fry yabo ikhethileyo ekudleni. Ukongezelela, i-aquarium inokukhanyiswa ngukukhanya okuqhekekileyo.
Emva koko udibanise amanzi amanzi kwi-aquarium. Oku kunokwenziwa nge-dropper, ngokukhululeka malunga ne-200 ml ngeyure. Okanye, kwangaphambili, udlulisele i-caviar ekhutshwe kumanzi onzima, kungekudala ngaphambi kwefry, apho kungabikho ubunzima obumele bube khona.
Imirhumo yomzimba yelungu lentsapho lenene
Izifo zezilwanyana: i-ear mite
Ixesha lomtshato kwinqanaba
Indlela yokufundisa inja ukuqhuba imiyalelo
Okubi kakhulu: njani ukulahlekelwa itekisi?
Indlela yokunyamekela kakuhle i-aquarium ekhaya
I-American Cocker Spaniel, Unonophelo
Ndihlala ndiloyiko ngabantu abathandayo, ndimele ndiyenze ntoni?
Isobho se-Cheese kunye nepelepele ebhaka
I-Mackerel ibhaka kwi-foil kunye ne-anyanisi
Konke malunga neMartini
Isikhumbuzo ngasinye somtshato sinegama kunye namasiko abo
Ukupheka imvana? Iingcebiso ezimbalwa
Uthando olungagqithwanga - njani ukululahlela?
I-Pumpkin Honey Pair
Sitshintshe kwiziganeko ezixhamlayo kwiintombi ezikhulelweyo
Ukutshala kunye nokukhula kwama daffodils
Izitya ezilula ezilula, zokupheka
I-Mesotherapy ebusweni - yintoni le nkqubo? Kuhluke njani kwi-biorevitalization?